यूएसबी ड्राइभबाटै यसरी लक, अनलक गर्नुहोस् कम्प्युटर - Tech News Nepal Tech News Nepal
आईतवार, माघ ११, २०७७ १९:१८
इन्टरनेट ब्याण्डविथ आयातमा सीमा, अब १०० जीबीपीएसभन्दा कम
काठमाडौं । यदि पासवर्ड बिर्सिएर तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरमा एक्सेस पाउनुभएन । कम्प्युटरलाई अनलक गर्ने तरिका खोज्दै हुनुहुन्छ । आज हामी तपाईंलाई एउटा यस्तो गोप्य उपायको बारेमा बताउने छौं, जसको मद्दतबाट तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरलाई अनलक गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रिडेटर एउटा निःशुल्क विण्डोज प्रोग्राम हो, जसले तपाईंको यूएसबी ड्राइभलाई लक भएकाे कम्प्युटर अनलक गरिदिने चाबी बनाइदिनेछ । जब यो ड्राइभ तपाईंको कम्प्युटरबाट निकालिन्छ, तब तपाईंको कम्प्युटर अनलक हुन्छ । कम्प्युटर अनलक गर्न तपाईंले यूएसबी ड्राइभलाई ल्यापटपमा प्लगइन गर्नु पर्दछ ।
यदि कसैले यूएसबी फ्ल्यास ड्राइभबिना तपाईंको कम्प्युटरमा एक्सेस गर्न खोज्छ भने उसलाई ‘एक्सेस डिनाइ’ म्यासेज आउनेछ ।
यो प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्न निम्न प्रक्रिया अपनाउनुहोस्:
१. प्रिडेटरलाई डाउनलोड र इन्स्टल गर्नुहोस् ।
२. प्रिडेटर लन्च भइसकेपछि यूएसबी फ्ल्यास ड्राइभ प्लग इन गर्नुहोस् । ड्राइभभित्र रहेको कुनै पनि कन्टेन्ट डिलिट वा अल्टर हुने छैन । यसैले आफ्नो प्राइमेरी थम्बड्राइभ प्रयोग गर्न नहिच्किचाउनु होस् ।
ड्राइभ इन्सर्ट गरिसकेपछि पासवर्ड क्रिएट गर्न भनेर एउटा डायलग बक्स देखापर्दछ । त्यसमा ओके क्लिक गरेर कन्टिन्यु गर्नुहोस् ।
३. प्रिफरेन्सेस विण्डोजमा केही ‘की सेटिङ’ याद गर्नुहोस् । सबैभन्दा पहिले ‘न्यु पासवर्ड’ फिल्डमा सुरक्षित र पृथक पासवर्ड सेट गर्नुहोस् । यदि तपाईंले आफ्नो यूएसबी ड्राइभ हराउनुभयो भने पनि कम्प्युटर अनलक गर्न त्यो पासवर्डको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईंलाई मनपर्छ भने अल्वेज रिक्वायर्ड बक्स चेक गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको कम्प्युटर अनलक गर्न थम्बड्राइभ प्रयोग गर्दा प्रत्येक पटक तपाईंले पासवर्ड इन्टर गर्न कम्प्युटरले निर्देशन दिनेछ ।
अब फ्ल्यास ड्राइभको तल सही यूएसबी फ्ल्यास ड्राइभ चयन भएको सुनिश्चित गर्नुहोस् । जब काम सकिन्छ तब ‘क्रिएट की’ क्लिक गरेर ओके क्लिक गर्नुहोस् ।
४. प्रिडेटर एक्जिट हुन्छ । एक्जिट भइसकेपछि यसलाई पुन: रिस्टार्ट गर्न टास्कबारमा रहेको प्रिडेटर आइकन क्लिक गर्नुहोस् । केही सेकेण्ड पछि यो आइकन हरियो हुन्छ जसको अर्थ प्रिडेटर रन भइरहेको छ भन्ने हो ।
प्रत्येक ३० सेकेण्डमा तपाईंको यूएसबी ड्राइभ प्लग इन छ कि छैन भनेर प्रिडेटरले चेक गर्दछ । यदि यो प्लग इन छैन भने कम्प्युटरको स्क्रिन आफै मधुरोहुँदै लक डाउन हुन्छ ।
यस्ता छन् अतिरिक्त टिप्सहरु
१. प्रिडेटरलाई रोक्न टास्कबार मेनुबाट जुनसुकै समय ‘पज मोनिटरिङ’ चयन गर्न सक्नुहुन्छ ।
२. यदि तपाईंको कम्प्युटर लकडाउन हुँदा कसैले एक्सेस गर्न खोज्छ भने पछि लगईन हुँदा एक्टिभिटी लग तपाईले देख्नुहुन्छ । टास्कबार मेनुबाट ‘भ्यु लग’ क्लिक गरेर लगलाई हेर्नुहोस् ।
तर यो सेटअपको एउटा खराबी के छ भने तपाईं सधै डाउन वान यूएसबी पोर्ट हुनुहुनेछ । तर यदि तपाईं प्रिडेटरमा बिक्नुभयो भने यसलाई कम्पेन्सेट गर्न तपाईंले यूएसबी हब खरिद गर्नुपर्नेछ ।
काठमाडाैं । आउँदो जेठ महिनादेखि नेपालमा अवैध मोबाइल नचल्ने भएका छन् । त्यसका लागि नेपाल
गुगल म्यापमा साथीको लोकेसन थाहा पाउन यसरी पठाउनुहोस् रिक्वेस्ट
काठमाडौं । गुगल म्यापको प्रयोग हामीले धेरै गरेको हुनुपर्छ । कुनै ठाउँमा जानुपर्ने छ, तर
तपाईंले जे देख्नुभएको छ विश्वास नगर्नुहोस, त्यो डिपफेक प्रविधि हुनसक्छ
काठमाडाैं । तपाईंले कहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विपक्षी दलका कुनै नेतालाई खुलेआम गालीगलौज गरेको भिडियो
गुगल सर्चलाई सजिलो बनाउने ६ स्मार्ट ट्रिक्स
काठमाडौं । इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोग बढ्दै गएसँगै अहिलेको समयमा हामीले कुनै पनि कुरा खोज्नका